Jose Mourinho Oo Ku Canaantay Xiddigihiisa Manchester United Inay Ixtiraamdarro U Muujiyeen Kooxda Basel - Laacib.net
Jose Mourinho Oo Ku Canaantay Xiddigihiisa Manchester United Inay Ixtiraamdarro U Muujiyeen Kooxda Basel
Jose Mourinho ayaa ku eedeeyay xiddigaha Manchester United inay ixtiraamdarro u muujiyeen kooxda Basel xalayto, isagoo sheegay inay si weyn u xiiseynayeen inay ciyaaraan kubada istutus ah iyo kubad PlayStation ah halkii ay natiijada diirada saari lahaayeen.
United ayaa guusha wadada u saarneyd ka dib markii ay goolal madax ah u dhaliyeen Marouane Fellaini iyo Romelu Lukaku, laakiin Mourinho ayaa si weyn uga carooday xirfladlenimo xumada ay ciyaartoydiisa soo bandhigeen ka hor goolkii seddexaad ee Marcus Rashford.
“Ka dib markii aan ciyaarta ka dhignay 2-o wax walba ayaa isbedelay, waxaan joojinay inaan ciyaarno, waxaan joojinay inaan fekerno, waxaan joojinay inaan si dhab ah u dheelno” ayuu yiri Mourinho oo careysan.
“Waxaan joojinay inaan qaadano go’aanada saxda ah, waxaana ku siganay inaan halis isgelino.
“Go’aano xun, kubad qiyaali ah, kubad PlayStation ah, farsamooyin – marka aad joojiso inaad si koox ahaan u ciyaarto, marka aad joojiso inaad si dhab ah u dheesho ma jecli, waxaadna galeysaa qamaar.
“Malaha ciyaartoyda waxa ay dareemeen inay ciyaarta koontaroolkeeda hayaan madaama aan 2-0 ku hogaamineyno laakiin kubadu waa kubad, waana inaad ixtiraamto kooxda kaa soo horjeeda.”
Man United ayaana ugu danbeyn ku badisay 3-0 iyadoo Rashford uu xaqiijiyay natiijada ciyaarta markii uu bedel ku soo galay. Laakiin waxaa guushooda hareeyay dhaawacii soo gaaray Paul Pogba kaasoo garoonka dhaawac uga baxay daqiiqadii 18aad ee ciyaarta.